यसकारण युटुबबाट एकाएक हराए भाग्य न्यौपाने – List Khabar
Home / समाचार / यसकारण युटुबबाट एकाएक हराए भाग्य न्यौपाने
admin December 23, 2021 समाचार Leaveacomment 78 Views
भूकम्पले भ’त्किएपछि फेरि ठडिएको धरहराको कन्टेन्टलाई आफ्नो युट्युब यात्रा खस्किएका बेला भाग्यले जसरी अन्तिम भिडियोका रुपमा छाडे, यसलाई युट्युब वृत्तमा अर्थपूर्ण हिसाबले हेरिएको छ। लामो ‘ग्याप’पछि ११ दिनअघि भने भाग्यले एक जना सडकमा भेटिएका
‘मनोरो’गी’लाई उद्धार गरेको भन्दै मोबाइलबाटै खिचेर छोटो भिडियो राखेका छन्। जसमा यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म २७ सयमात्रै भ्युज भएको छ। आफू चर्चामा आउन युट्युबलाई ज’थाभावी प्रयोग गर्दा कसरी एउटा उदाएको युट्युबर प’तन हुन्छ? भाग्य यतिखेर युट्युब वृत्तमा यसकै एउटा उदाहरण बन्न पुगेका छन्।
Previous युवायुवतीको यस्तो हर्कत, भिडियो बन्यो भाइरल, १ करोडले हेरे (भिडियो सहित)
Next बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? सावधान ! यस्तो स’मस्या झेल्नु पर्ला